Kiiboodhka cusub ee Emoji ee iOS 8.3 | Wararka IPhone
Kiiboodhka cusub ee Emoji ee iOS 8.3
Cusboonaysiinta cusub ee Apple soo saartay dhawr maalmood ka hor, macruufka 8.3, oo ka mid ah liistadeeda waaweyn ee isbeddelada waxaa ka mid ahaa mid dadka isticmaala ay ugu yeedheen fiiro badan: kiiboodhka cusub ee Emoji. Ka mid noqoshada 300 astaamood oo cusub ayaa ka dhigtay isticmaaleyaal badan inay ku degdegaan inay cusbooneysiiyaan aaladooda, laakiin ka dib markii ay sidaas sameeyeen ayay taas ogaadeen marka lagu daro emoji-kan cusub waxaa jira kumbuyuutar la cusbooneysiiyay, oo leh hagitaan gebi ahaanba ka duwan, taasna sidoo kale waxaa ku jira xulasho cusub oo emojis ah oo illaa iyo hadda aan gebi ahaanba la aqoon iyaga. Waxaan ku tusaynaa kumbuyuutar cusub oo fiidiyow ah waxaanuna kuu sharxaynaa sida uu u shaqeeyo si loo arko sida loo dhex maro iyo sida loo doorto emoji cusub.
Tilmaanta kumbuyuutarka cusubi waa mid socda. Wareeg joogto ah ayaa noo oggolaanaya inaan ku dhex marno xaddiga weyn ee emoji ka tagida hagitaankii qoraalkii hore iyada oo loo marayo tabs iyo isla mar ahaantaana loo marayo bogag ku dhex jira tab kasta Tani waxay noqon kartaa wax yar oo wareer ah marka hore, laakiin waqti yar oo tababar ah waxaad ku heli kartaa emoji si ka dhakhso iyo raaxo badan qaababkii hore. Dabcan waxaan sii wadeynaa inaan sii wadno suurtagalnimada inaan si toos ah ugu aadno qayb ka mid ah astaamaha ka muuqda xagga hoose ee shaashadda.
Sida lagu muujiyey fiidiyowga, si aad u awoodo inaad doorato astaamaha cusub oo leh midabyo maqaar oo kala duwan, waa inaad doorataa riix oo hayso emoji illaa inta xuluhu ka muuqanayo leh noocyo kala duwan. Mar alla markii aan midkood dooranno, waxay u muuqan doontaa inay tahay midda caadiga ah, oo markaan taabasho yar ku samaynno emoji-ka ayaa si toos ah loogu dari doonaa iyadoon loo baahnayn inaan mar kale doorano. Haddii aan dooneyno inaan beddelno emoji-ga caadiga ah, waa inaan ku celcelinno nidaamka xulashada adoo hoos u haya. Iyo emoji cusub? Hagaag, cusub wixii cusub la dhaho way yar yihiin. IMac, Apple Watch iyo iPhone 6 waa kuwo cusub, laakiin xusuusnow in qofka wax qaata si uu u arko waxay u baahan doonaan in la cusbooneysiiyo iPhone ama iPad oo lagu cusbooneysiiyo macruufka 8.3 ama Mac leh Yosemite 10.10.3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 8 » Kiiboodhka cusub ee Emoji ee iOS 8.3
Miyaanay ku dhicin qofna in marka aad bilawdo kiiboodhka emoji, ay qaadato meel ka badan kiiboodhka IOS? Waxaan u fiirsadaa markaan qoraayo fariin ama wax kumbuyuutareedka ii ogolaanaya inaan arko hal sadar oo qoraal ka badan kan kale.
Ku jawaab alicante_alex
Salaan! Waxaan hayaa iPhone 5s waxayna ahayd qiyaastii 2 bilood tan iyo markii aan ku dhejin karo emoticons codsi kasta (Facebook, whats app, instagram). Waxay ka muuqdaan kumbuyuutarka, laakiin markaan mid riixo arjiga ayaa xirmaya. Waxaan horeyba isugu dayay: tirtirka whats app, instagram, iwm oo aan markale ku rakibaa, cusbooneysiinta barnaamijka iphone, tirtiray kiiboodhka Emoji oo dib u dhigay waxna. Ma jiraa qof garanaya sababta ay tani u dhici karto?
Ku jawaab Flo
Sida iska cad waa cillad software ah ee qalabkaaga maxaa yeelay taasi waa inaysan dhicin. In kasta oo xalka uu u muuqan karo mid xagjir ah, waan soo ceshan lahaa iyada oo aan kayd lahayn (maxaa yeelay haddii aad dhigto keydka waad dib u celin kartaa waxa qaladka keena) waana hubaal inay adiga xallin doonto.
Juan Bustillo Busalacchi dijo
Isla sidaas ayaa igu dhacda. Waxaan si lama filaan ah u bilaabay burburinta ios7.0.1 oo aan la socdo jalibreak, waxaan u cusbooneysiiyay 9.1, iphone ayaa la soo celiyey shilkiina waa sidii hore. Waxa aanan sameyn doonin waa luminta dhammaan macluumaadka sababo laxiriira shucuurta qaarkood, xalka aad soo jeedineyso ayaa ka xun dhibaatada
Jawaab Juan Bustillo Busalacchi
Beddel astaamaha galka OS X
Maxaa la sameeyaa haddii aan lumiyo iPhone-kayga?